Guqula i-Oversize 2GB PST File ibe yi-Outlook 2003 Format - Umhlahlandlela Wezinyathelo Ngezinyathelo
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Outlook Repair Guqula i-Oversize 2GB PST File ibe yi-Outlook 2003 Format
Ukusebenzisa DataNumen Outlook Repair Ukuguqula i-Oversize 2GB PST File ibe yi-Outlook 2003 Format
Qaphela: Kufanele ube ne-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ezifakiwe ukusebenzisa indlela ekule mhlahlandlela.
Lapho uhlangana ifayela le-Outlook PST elikhulu kakhulu (Ifayela le-PST lilingana noma likhulu kune-2GB) futhi ayikwazi ukuyivula ngempumelelo ku-Microsoft Outlook 2002 noma izinhlobo eziphansi, ongayisebenzisa DataNumen Outlook Repair ukuskena leli fayela, ukubuyisa yonke idatha ekulo, bese uwagcina efayeleni le-PST elisha ngefomethi ye-unicode ye-Outlook 2003 engenawo umkhawulo kasayizi ongu-2GB. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa i-Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme ukuvula ifayela elisha le-PST futhi ufinyelele kuyo yonke idatha ngaphandle kwezinkinga.
Qaphela: Ngaphambi kokuguqula ifayela le-PST elikhulu kakhulu nge DataNumen Outlook Repair, sicela uvale i-Microsoft Outlook kanye nezinye izinhlelo zokusebenza ezingashintsha ifayela le-PST.
Ngephutha, DataNumen Outlook Repair izogcina idatha ebuyisiwe efayeleni le-PST elilungisiwe elisha elibizwa nge-xxxx_fixed.pst, lapho i-xxxx igama lefayela lomthombo le-PST. Isibonelo, kufayela lomthombo we-PST i-Outlook.pst, igama elizenzakalelayo lefayela elihleliwe lizoba i-Optlook_fixed.pst. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Njengoba sifuna ukuguqula ifayela le-PST elikhulu kakhulu libe yifomethi ye-Outlook 2003, kufanele sikhethe ifomethi yefayela le-PST elihleliwe liye ku- “Outlook 2003-2010” ebhokisini le-combo eceleni kwebhokisi lokuhlela lefayela elihleliwe. Uma usetha ifomethi ku- "Outlook 97-2002" noma ku- "Auto Determined", lapho-ke DataNumen Outlook Repair ingahluleka ukucubungula nokuguqula ifayela lakho le-PST elikhulu.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen Outlook Repair intando starukuskena nokuguqula ifayela le-PST elingumthombo omkhulu. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo, uma ngabe ifayili le-PST elingumthombo omkhulu lingatholwa futhi liguqulwe libe yifayela elisha le-Outlook 2003 PST ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomyalezo elifana naleli:
Manje usungavula ifayela le-PST elisha eline-Microsoft Outlook 2003 noma izinhlobo eziphakeme. Futhi uzothola zonke izinto zefayela le-PST elingaphezulu ngokweqile zitholakale kokusha.
Kufayela elisha le-PST elilungisiwe, okuqukethwe yimilayezo nokunamathiselwe kuzongena esikhundleni semininingwane yedemo. Ngiyacela oda okufushane umnyuziki ukuthola okuqukethwe okuguqukile uqobo.
Guqula i-Oversize 2GB PST File ibe yi-Outlook 2003 Format